Sidee inuu ka soo kabsado Data ka Hard Drive qaybaha xun
Waxaan ka Hard Drive soo kaban karto, Faylal ay qaybaha xun?
Hard Drive ka soo kabsado Data qaybaha xun ee 3 Talaabooyinka
Hello, waxaan haystaa 80GB Hitachi drive adag dibadda. Maanta markii aan xiriir aan computer, waxaan fariin qalad ah helay "Baadi 123 ma akhriyi kartaa qaybta 1". Anigu ma heli karo drive adag tan iyo markaas. Xogta cimrigayguna ayaa drive iyo xogta aan dib waxaan doonayaa. Baryayaaye, ii sheeg sida aan bogsan karaan dhammaan macluumaadka aan. Mahad badan.
Marka wadid aad u adag waxaa jidh ahaan waxyeelo ama la jejebiyey, fursado aad u hanato faylasha aad ku yar tahay. Laakiin waxaa jira xal aad u soo kabsado xogta ka drive adag qaybaha xun haddii drive adag kharribmay oo kaliya. The drive kharribeen adag macnihiisu waxa weeye qalad nidaamka aad drive iyo files kuwa xaqa geli karin. Iyadoo qaybta xun barnaamijka xogta drive adag ah, xogta aad si fudud baxey karo.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa sida qalab kuwa talosaaran si aad u soo kabsado xogta ka drive adag qaybaha xun. Waa awoodaan inay ka bogsadaan oo dhan qoruhu ka wadid aad u adag. Habkaani wuxuu ku soo kabashada awoodda barnaamijka aad u saamaxaaya in ay soo celiyaan tiro aad u badan oo ah noocyada file, oo ay ku jiraan images, videos, document files, files audio, iwm sokow, waxa ay si buuxda u la jaan qaada drive adag computer iyo drives adag saari karo.
Download version tijaabo ah si ay dib u soo ceshano xogta ka drive adag qaybaha xun hadda.
Fiiro gaar ah: xogta Khasaaray ku wadid aad u adag qaybaha xun si fudud loo overwritten karaa, waxaad u baahan tahay si ay u joojiyaan qaadan in drive adag in la isticmaalo haddii aad rabto in ay dib u hanato dhammaan faylasha lumay. Waxaa intaa dheer, fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan drive adag qaybaha xun.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan drive adag qaybaha xun kabashada xogta
Labada nooc oo barnaamijka leeyihiin hawlaha la midka ah, oo waxaan ku tusi doonaa sida loo farsameeyo soo kabashada la Windows version of Wondershare Data Recovery.
Sida ay muujinayso hoos ku image, ka dib markii ay barnaamijka on your computer Windows, waxaad heli doontaa suuqa kala ah 3 hababka soo kabashada.
Aan dooro "Recovery ah Barzakh," inuu ka soo kabsado soo ceshano xogta ka drive adag qaybaha xun.
Tallaabada 2 xijaab Scan ku wadid aad u adag qaybaha xun.
In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay in ay doortaan drive adag qaybaha xun uu furmo.
Markaasay aad u baahan tahay in ay doortaan Risaalo on drive in ay adag tahay oo guji "Ka bilow" button aad u bilaabayso raadinta files lumay waxaa ku.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ku socoto inuu ka soo kabsado xogta ka drive dibadda adag qaybaha xun, fadlan hubi in laga garan karaa your computer.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka drive adag qaybaha xun
Ka dib markii iskaanka, files on xijaab aad drive adag ee lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka. Waxaad ka arki kartaa magacyada folder asalka ama magacyada file in lagu hubiyo sida badan oo files ee drive in ay adag tahay qaybaha xun la dib ula karo.
Ugu danbeyn, waxaad karo files iyo fayl aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Si looga hortago xogta ka soo kabsaday la overwritten, ma waxaad kala socon kartaa files si drive asalka adag qaybaha xun.
U dayactir drive adag qaybaha xun
Dhab ahaantii, waxaa jira xal si uu u xaliyo wadid aad u adag qaybaha xun haddii drive ee aan burburin. Waxaad ka akhrisan kartaa sida loo dayactiro Waaxaha xun ee Hard Drive oo ay isticmaalaan Wondershare Liveboot 2012 si ay u xaliyaan dhibaatadan. Laakiin ka hor inta aadan u xaliyaan barnaamijka, inaad si fiican u soo kaban lahaa xogta ka ekaada.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Windows 7
Sida loo hagaajin drive adag marka qalad dhacdaa
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga PS3 drive adag
Top 5 weerar Hard Drive Data Recovery Software
> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Data ka Hard Drive qaybaha xun